युफोन Info. About. What's This?
पाक दूरसञ्चार मोबाइल लिमिटेड वा युफोन एक पाकिस्तानी जिएसएम सेवा प्रदायक हो। यो पाकिस्तानी बजारमा प्रवेश गर्न तेस्रो मोबाइल सञ्चालक थियो। यो २९ जनवरी २००१ मा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा युफोनको ब्रान्ड नामले यसको सञ्चालन सुरु गरिएको थियोे।
पाक टेलिकम मोबाइल लिमिटेड, पाकिस्तान दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको एक पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो। पीटीसीएल वा पाकिस्तान दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको निजीकरण पछि युफोन सन् २००६ मा एटिसलातको एक भाग बनेको थियोे।
युफोन सबैभन्दा सानो जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक हो र यसका अरूका तुलनामा सबैभन्दा थोरै, २१ मिलियन प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन् । सबै चार मोबाइल सञ्चालकहरू भन्दा कम यसले १३ % बजार साझेदारी गरेको छ।
युफोनले रसिद खानलाई कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरेको थियोे। जुन २००८ देखि २०१४ सम्म मोबिलिङ्क हाल जज् को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए।
यूफोनले १०,००० ठाउँहरूमा र पाकिस्तानका सबै प्रमुख राजमार्गहरूमा सेवा पुर्‍याएको छ। यूफोनले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङको लागि १६० भन्दा बढी देशहरूमा २८८ भन्दा बढी इजाजत प्राप्त सञ्चालकहरू सँग उपलब्ध गराएको छ। युफोनले पाकिस्तानको सबैभन्दा छिटो बढ्दो ३ जी नेटवर्क पनि प्रदान गर्छ, र ब्ल्याकबेरी रोमिङ १२२ देशहरूमा २०० भन्दा बढी प्रत्यक्ष सञ्चालकहरूसँग उपलब्ध छ। युफोनले सन् २०१४ मा पाकिस्तानको एक प्रमुख सहर गुजराणवालामा ३ जी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
कम्पनीले २९ जनवरी २००१ मा इस्लामाबाद शहरबाट युफोनको ब्रान्ड नाममा आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेको थियोे । युफोन सन् २००६ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दूरसञ्चार निगम समूह एटिसलात को एक प्रमुख भाग बनेको थियोे ।
2. रेडियो आवृत्ति सारांश
युफोनले २०१४ को सुरुमा आयोजित एनजीएमएस लिलाममा २१०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमको ५ मेगाहर्ज ब्लकमा बोली दिएको थियो । तथापि बढ्दो माग र ब्यान्ड चौडाइको कमीका कारण डिसेम्बर २०१६ मा, युफोनले आफ्नो ९०० मेगाहर्ज २ जी सञ्जालको भाग ३ जी एचएसपीए मा नै झार्ने निर्णय गरेको थियोे । हनल नेटवर्कमा बढ्दो चापको सामना गर्न दुई आवृत्तिहरूमा ३ जी सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । युफोनले मात्र ९०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमकोसाथ कराची, लाहोर, रावलपिंडी / इस्लामाबाद, अबोटाबाद, शेइखपुरा र सियालकोट लगायतका शहरहरूमा पुन सेवा सञ्चालन गरेको छ ।
युफोनले सन् २०१२ मा पाकिस्तान विज्ञापनदाता समाज द्वारा आयोजित, पिएएस अवार्ड्स कार्यक्रममा सर्वश्रेष्ठ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको पुरस्कार जितेको थियोे ।